Nhau - Ndeupi musiyano uripo pakati peviri chiito polisher uye rotary polisher
Ndeupi musiyano uripo pakati peviri chiito polisher uye rotary polisher?
Kana zvasvika pakusarudza muchina unopukuta, mumwe wemibvunzo inowanzo bvunzwa nevatengi vedu ndewekuti: "Ndeupi musiyano uripo pakati peyeku-chiita polisita uye wekutenderedza polisha?" Mubvunzo wakanaka kwazvo uye kune avo vari kungotanga nemuchina wekupolisha, mhinduro yakakosha!
Rotary Polisher ndiyo yekare mukirasi yayo, isati yabuda mune nyowani-chiito, isu taingova nerudzi urwu rwekupolisha. Vanotenderedza Rotary vakanyatsojeka - musoro unotenderera nzira imwe chete zvisinei kuti unoitsimbirira zvakadii kupenda yako yemota, inoenderera ichitenderera ne spidhi yakasarudzwa. Iyo zvakare inotenderera munzira inogara ichitenderera, ichigadzira yakatemwa ine hasha asi ichigadzira kupisa kwakawanda. Rotary polisher inoda kuti iwe uve neruzivo rwakawanda, iwe unofanirwa kufambisa polisher nemaoko uye iwe unofanirwa kuziva kuti unokurumidza sei kufambisa muchina kuyambuka pendi. Iyo rotary polisher ine hukasha, saka ichagadzirisa zvakadzama kukwenya uye kupenda kusakwana, chete kana ikashandiswa nemazvo.
Dual Action Polisher (kana DA Polisher sezvo iri inowanzo kupfupikiswa) yaive shanduko yekugadzira. Inotenderera nenzira mbiri dzakasiyana: musoro unotenderera muchiita chinotenderera pane chakakombama icho chinozungunukira mukufamba kutenderera, nekudaro uchigovera kupisa kunzvimbo yakakura, inodzivirira kupisa kwakanyanya uye kukakavara kuvaka, ichiita kuti ive yakachengeteka zvakanyanya kumotokari yako. Nekuda kweizvozvo, iwe unokwanisa kusiya iyi polisher ichitenderera panzvimbo imwechete uye ichidzivirira kubva pakupisa pendi yako. Izvi zvinoita kuti DA ive sarudzo yakasarudzika kune anofarira amateur anotarisa kuchengetedza mota ichitarisa 'tip kumusoro' asi pasina kunetseka kweinogona kuzodzosera spray!